Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ụwa 1st iPhone, iPad, na iPod aka data mgbake software. Ọ na-enye juru ngwọta naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi ederede, foto, ndetu, olu memos, Safari Ibe edokwubara na ndị ọzọ si iPhone, iPad na iPod aka. E wezụga na-agbake data kpọmkwem site iPhone, iPad na iPod aka, ọ na-enye gị ohere iji naghachi data si iCloud na iTunes ndabere faịlụ, na-enye gị 3 ụzọ na-azụ furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọhụrụ iOS 8, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad Air 2 na ndị ọzọ.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na A ilekiri
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ a mfe ma dị mfe na-eji ngwá ọrụ. Ya 3 isi atụmatụ bụ: naghachi data si iOS ngwaọrụ ozugbo, naghachi data si iTunes ndabere faịlụ, naghachi data si iCloud ndabere faịlụ. E wezụga, ọ bụ ike ịrụzi iOS sistemụ mbipụta: iPhone araparawo Iweghachite ọnọdụ, rapaara na Apple logo, na iOS ngwaọrụ ịrụ abnormally.
Na-eji software naghachi faịlụ, dị ka photos, ederede ozi, kọntaktị, na ndị ọzọ, ị kwesịrị ị na-eso 3 dị mfe nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Họrọ mgbake mode: Naghachi si iOS Ngwaọrụ, naputa site na iTunes ndabere File, ma ọ bụ naputa site na iCloud ndabere File.
Nzọụkwụ 2. iṅomi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data:
Ọ bụrụ na ị họrọ "naputa site na iOS Ngwaọrụ", ị kwesịrị ị jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na ike iṅomi nke furu efu ma ọ bụ ehichapụ data.
Mgbe ahọrọ "naputa site na iTunes ndabere File", ị ga-nyere nhọrọ ibudata iTunes ndabere faịlụ site na kọmputa gị ma wepụ ya maka gị mkpa data.
Ọ bụrụ na họrọ "naputa site na iCloud ndabere File", ị ga-mkpa gị banye iCloud akaụntụ ibudata iCloud ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 3. All data ga-ota n'ime edemede na-egosipụta na n'ihi window. Ị nwere ike pịa faịlụ ụdị na-ekpe sidebar ka ịhụchalụ data. Mgbe ahụ, lelee na chọrọ ndị na pịa "Naghachi" agbake data ma gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụ kọmputa.
Maka nkọwa ndị ọzọ maka onye ọ bụla mgbake mode, biko ego naputa site na iOS Ngwaọrụ, naputa site na iTunes ndabere File, na naputa site na iCloud ndabere File.
Mgbe ọ na-abịa ịrụzi Sistem, biko ego nkọwa >>
Ebe ọ bụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere 3 mgbake ụdịdị: naputa site na iOS Ngwaọrụ, naputa site na iTunes ndabere File, ma ọ bụ naputa site na iCloud ndabere File, ị na-kwesŽrŽ-ahọrọ nri mgbake mode dị ka gị mkpa. Lee ndị 3 mgbake ụdịdị akwado faịlụ na ngwaọrụ gị pụrụ iwere dị ka akwụkwọ.